မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လှုံ့ဆော်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Neurocircuitry: စွဲအားနည်းခြင်း၏အရေးပါသောကာလ (2003) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်စိတျရငျးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Neurocircuitry: စွဲအားနည်း၏တစ်ဦးကဝေဖန်ကာလ (2003)
နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003 ဇွန်လ; 160(6): 1041-1052 ။
R. အင်ဒရူးကုန်သည်များ, MD ဂျိန်း R. တေလာ, Ph.D ဘွဲ့ကိုနှင့် မာ့ခ် N. Potenza, MD Ph.D ဘွဲ့ကို
epidemiological လေ့လာမှုများစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စွဲလမ်းမမှန်၏စတင်ခြင်းနှင့်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အဓိကအားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်အာရုံစိုက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာတ္ထုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အားနည်းချက်တစ်ခုဇီဝအရေးပါသောကာလအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment ထောက်ပံ့အခြေခံများနှင့်လက်တွေ့ဒေတာကိုဖော်ပြရန်။
အဆိုပါစာရေးဆရာဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment စုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ neurocircuitry နောက်ခံလှုံ့ဆျောမှု, Impulse နှင့်စွဲနှင့် ပတ်သက်. မကြာသေးမီစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။
ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment လှုံ့ဆျောမှု, Impulse နှင့်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်သငြ်ကူးေူပာင်းမြရိုအပြုအမူအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက် Impulse နှင့် / သို့မဟုတ်အသစ်အဆန်းရှာတိုကျရိုကျ cortical အတွက်ရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲများနှင့် subcortical monoaminergic စနစ်များအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားသာချက်များအရွယ်ရောက်အခန်းကဏ္ဍမှလိုက်လျောညီထွေများအတွက်သင်ယူမှု drives တွေကိုမြှင့်တင်စေခြင်းငှါဒါပေမယ့်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွဲလမ်းလုပ်ရပ်များပိုမိုအားနည်းချက်အပ်နှင်းလိမ့်မည်။
ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပါဝင်ပတ်သက် neurocircuitry အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးတူးဖော်ရေးသိသိသာသာဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူကိုနားလည်ဘို့သက်ရောက်မှုတွေ, စွဲအားနည်းချက်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်စွဲလမ်း၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးရှိပါတယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန် (United States မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါ, သေဆုံးမှုများနှင့်ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်များတစ်ဦးဦးဆောင်အကြောင်းမရှိများမှာ1) ။ တ္ထုများနှင့်လူမှုရေးခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ဒေသဆိုင်ရာရရှိနိုင်မှု (တိကျတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး2) ။ သုံးကိုအဓိကလေ့လာတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီး၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလယဉ်ကျေးမှုခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်တ္ထုများအနှံ့ operating, မူလတန်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်စပ်မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု spanning အထွေထွေလူဦးရေရဲ့လေ့လာမှုများအားဖြင့်၎င်း, အခြားရောဂါရှာဖွေစံ (၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူညွှန်ပြအဖြစ်ပထမဦးစွာမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများယေဘုယျအားဖြင့်, အဟောင်းတွေလူကြီးများထက်စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မြင့်မားမှုနှုန်းပြ3-5) ။ ဒုတိယအချက်မှာလူကြီးများအတွက်ဖော်ထုတ်စွဲလမ်းမမှန်အများဆုံး (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ငယ်ရွယ်လူကြီးများ6, 7) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အများဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမေရိကန်ဆေးလိပ်သောက်သူများ (အသက် 18 မတိုင်မီဆေးလိပ်ကိုစတင်8), နှင့်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်းအသက်အရွယ် 25 ပြီးနောက်ဆန်းဖြစ်ပါတယ် (9) ။ အသက်အရွယ် 40 နှင့် 15 အကြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူအရက်သမားအတွေ့အကြုံကိုရက်-related လက္ခဏာတွေ 19% ကျော်နှင့်အရက်အပေါငျးတို့သဖြစ်ပွားမှု 80% (အသက်အရွယ် 30 မတိုင်မီစတင်10) ။ အဆိုပါပျမ်းမျှဖြစ်ပွားမှု 16% အသက်အရွယ် 50 ပြီးနောက်အသက်အရွယ် 15 နှင့် 18 နှင့်ရှားပါးစတင်အကြားအစတွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စတင်အသက် (20 နှစ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်3) ။ တတိယအချက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်း (နဲ့အတူ-မျိုးစုံတ္ထုများဆက်နွယ်၏-နှင့်အသုံးပြုမှုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အပါအဝင် သာ. ကြီးမြတ်စွဲပြင်းထန်မှုနှင့်ရောဂါဟောကိန်းထုတ်6, 11, 12) ။ epidemiological စစ်တမ်းများယေဘုယျအားဖြင့်အသက်အရွယ်အနှံ့အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များအတွက်ထက်အထီးအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ပိုမိုပျံ့နှံ့ပြသပေမယ့်အဲဒီအသက်အရွယ်-တိကျတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစတင်ခြင်းအတွက်ကျားမ-လွတ်လပ်သောအချက်များ၏တည်ရှိမှုအကြံပြုခြင်း, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံးလူမျိုးကွဲများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည် (4, 13).
စွဲလမ်းမမှန်၏ကမ်ဘာဦးကနှစ်ခု key ကို variable တွေကိုမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏တစ်ဦး fixed ငွေပမာဏ (ပေးသောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့် 1 ၏ 2) ဒီဂရီ / ငွေပမာဏ) စွဲဖို့မွေးရာပါအားနည်းချက်ရှိပါတယ်14, 15) ။ သို့သော်အထက်ပါအချက်များသည်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ရှိမရှိနားလည်ခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစတင်ခြင်းရှင်းပြအတွက်အရေးပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုအပေမယ့်, သက်တူရွယ်တူများနှင့်မိသားစုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမူးယစ်ဆေးရရှိနိုင်မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက် (ဖို့အတွက်အထောက်အကူ16), သက်သေအထောက်အထားအများအပြားလိုင်းများတစ်ဦးတည်းဆယ်ကျော်သက်ဘဝအထူး sociocultural ရှုထောင့်အပြည့်အဝ သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုများအတွက်အကောင့်မအကြံပေးချင်ပါတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ (အရက်နှင့်နီကိုတင်း) ၏ရရှိမှုအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနေရာအနှံ့ဖြစ်ကြပြီးတရားဝင်လူကြီးများအဘို့ကိုသာပိတ်ဆို့ထားပါသည်, ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်စတင်ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်အာရုံစိုက်နေသည်နှင့်တိုးမြှင့်မထားဘူးပေမယ့် တိုးမြှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာထုံးစံ၌။ တ္ထုများနှင့် ပတ်သက်. ဆယ်ကျော်သက်ယဉ်ကျေးမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းန့်အသတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားရှိရာဥရောပ, ခုနှစ်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ရောဂါအလားတူမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများ (များတွင်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်17, 18).
တစ်ဦးချင်းစီအတွင်းမျိုးဗီဇနှင့် neurobiological အချက်များ (စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှစမ်းသပ်ရာမှ "ခလုတ်ကို tripping" အတွက်လိုအပ်သောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့တံခါးခုံကိုလျှော့ချရန်စဉ်းစားနေကြ15) ။ လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားကြီးထွားလာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တရားမဝင်နှင့်တရားဝင်ပိတ်ဆို့အရေးယူတ္ထုများရဲ့စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများမှမြင့်ဇီဝအားနည်းချက်တစ်ခုကာလကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာ, မြီးကောင်ပေါက် (အရွယ်ရောက်သူထက်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်ဦးထက်ပိုမိုးရွာသွန်းမှုတိုးတက်မှုသရုပ်ပြ4, 19) ။ လူကြီးများထက်နည်းပါးလာစီးကရက်ဆေးလိပ်နေသော်လည်းမြီးကောင်ပေါက် (အသုံးပြုမှုအလားတူအဆင့်ဆင့်မှာမှီခို၏မြင့်မားသောနှုန်းကိုပြသ20) နှင့်အရက်သုံးစွဲမှုနှုန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးတစ်လျှောက်လုံးဆင်တူပေမယ့်, အလွဲသုံးစားမှု / မှီခို၏နှုန်းထားများ (အသက်နှင့်အတူပြောင်းပြန်ကွဲပြား5) ။ ဤဆောင်းပါးသည်စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment များအတွက်အခြေခံများနှင့်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားသုံးသပ်ပြီး။ ထင်ရသော Impulse နှင့် suboptimal ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအပြုအမူတွေစွဲ၏ pathophysiology တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စိတ်ခွန်အားနိုး circuitry များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသက်ဆိုင်ရာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏စံတန်ဖိုးစရိုက်များအဖြစ်ဖော်ပြနေကြသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူမြှင့်တင်စိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များတစ်ပြိုင်နက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မှဦးဆောင်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေး neurobehavioral သက်ရောက်မှုမှအားနည်းချက်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များ၏ပျံ့နှံ့ schizophrenia အဓိကအကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်, antisocial နှင့်နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ခြင်း, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်ခြီးမွှောကျနေသည်2, 3, 10, 21, 22) ။ ထိုအပုံမမှန်၏ antecedent သို့မဟုတ်အပြည့်အဝရှိပါကြောင်းဗားရှင်းလည်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် (23-25) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ဤစိတ်ရောဂါနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အသင်းအဖွဲ့များဘုံဦးနှောက်ယန္တရားသည်ဤကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်မှအားနည်းချက်အခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများအထွေထွေလက်တွေ့ motif သို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျော်လွန်ကြောင်းအမူအကျင့်စရို, စိတ်ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါအုပ်စုများအဖြစ်ထင်ရှားစွာပြခြင်းငှါ, ။ ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ် (တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သော motif ကိုယ်စားပြုတယ်23, 26, 27) ။ လက်တွေ့ Psychiatry အခြားဖော်ပြရန်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူသကဲ့သို့, တိကျသော Impulse ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်အသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်အာရုံရှာ၏စရိုက်များရန်၎င်း၏ကြားဆက်ဆံရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံကြသည်။ Impulse ၏အမျိုးပေါင်း (အလက်တွေ့တိုင်းတာမှုအပေါ်မူတည်ပြီးအဆိုပြုထားခဲ့ကြခြင်းနှင့်တိကျသောဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ function ကိုအကဲဖြတ်ခံရ28) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး, လိင်, အစားအစာ, လူမှုရေးပါဝါ (အကြမ်းဖက်မှုအားဖွငျ့), ငွေ, သို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်များကို (အဖြစ်, ဆုလာဘ်များဆည်းဆင်းရဲသားတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအဖြစ် Impulse ရေးဆွဲ27, 28) ။ ဒီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်အတူထကြွလွယ်သောအပြုအမူတွေကိုယေဘုယျအားဖြင့်မဲ့ဖြစ်စေသည်သို့မဟုတ် deleterious အကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်; တိုးမြှင့်အသစ်အဆန်းရှာသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအပြုအမူ (ထကြွလွယ်သောစဉ်းစားစေခြင်းငှါ29).
လေ့ဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါ comorbidity အတွက်နှောင့်အယှက်နှင့်အတူဖော်ထုတ်စိတ်ရောဂါမမှန် (Impulse နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်3, 27, 28, 30) ။ High-အန္တရာယ် / Low-အကျိုးအတွက်ရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်နှောင့်နှေးဆုလာဘ် (ယာယီလျှော့) ကျော်ပြောင်ချက်ချင်းဆုလာဘ် (များအတွက်ဦးစားပေးအဖြစ် Impulse ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းတာတူရိယာ31, 32) ။ Impulse တုံ့ပြန်မှုပုံစံများချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ comorbidity (နဲ့အတူချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်း, စိတ်ရောဂါ diagnoses နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ26, 33) ။ အလားတူတူရိယာသေးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်လျှောက်ထားကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်, Impulse နှင့် / သို့မဟုတ်အသစ်အဆန်းရှာယေဘုယျအားဖြင့် (အသက်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ကျဆင်းမှုအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ရန်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်34, 35).
Impulse နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏ pathogenesis နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အပါအဝင်တိကျတဲ့လက်တွေ့အခင်းအကျင်းအတွက်သူတို့ရဲ့ သာ. ကြီးမြတ်ပျံ့နှံ့နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်သက်သေပြလိမ့်မည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုး psychopathology အလားတူပုံစံများအကြံပြုရှယ်ယာ features တွေအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏လက်တွေ့ Syndrome ၏ Conceptual ။ ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှစ်ရှည်မဲ့ဖြစ်စေသည်ရလဒ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အကြောင်းအရာအလိုက်သဘောထားကိုပြသပါ။ အလားတူပင်စွဲလမ်းတ္ထုများစုပေါင်းလူမှုရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ရလဒ်များ (များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာနောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှဦးဆောင်ဓာတုဆွနဲ့ဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆော်မှုအလွှာအတွက် neuroplastic အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်15) ။ အလုပ်မဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုး repertoire ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Impulse နှင့်စှဲ analog လက်တွေ့ Conceptual စိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry ပါဝင်သောဘုံ neurobiological ယန္တရားများကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
စိတ်ခွန်အားနိုးဦးနှောက်စနစ်များ၏ခန္ဓာဗေဒနဲ့ function ကိုနားလည်ခြင်း Impulse, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက်အန္တရာယ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအပြန်အလှန်စာပေးစာယူနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၏ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး "input ကို" သတင်းအချက်အလက် process လုပ်တယ်နှင့်အမူအကျင့် "output ကို" ဆုံးဖြတ်သည်ကြောင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု (အဖြစ် conceptualized နိုင်ပါသည်36) ။ အဲဒီအစား discrete လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် discrete အပြုအမူတွေကိုထုတ်လုပ်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှု system အဖြစ် operating ထက်, လှုံ့ဆျောမှု (ရှင်သန်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အပြုအမူစုစည်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Higher-အလို့ငှာအပြောင်းအလဲနဲ့ကပါဝင်ပတ်သက်37) ။ ပန်းတိုင်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ (အနေနဲ့အကျိုးရှိအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်အတွက်မျိုးစုံပြောင်းလဲနေတဲ့ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်များ (ဥပမာ, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ဒါမှမဟုတ်နာကျင်မှု) နှင့် (သယံဇာတသို့မဟုတ်မျိုးပွားမှုအခွင့်အလမ်းများ, စိုးရိမ်ရေမှတ်၏ရှေ့မှောက်တွင်အပါအဝင်) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစည်းကပါဝင်ပတ်သက်31) ။ ဒီရှုပ်ထွေးနက်နဲပိုဆိုးလာ, မျိုးစုံရှင်သန်ရပ်တည်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အာကာသနှင့်အချိန်အတွင်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းအရေးကြီးသောပေမယ့်လွတ်လပ်စွာမှီဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဤရည်မှန်းချက်များတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောမှီဖို့အလားအလာအောင်မြင်သောအပြုအမူမဟာဗျူဟာ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုအဲဒီမှာမတည်ရှိပေမည်။ စိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry ထို့ကြောင့် (ကအခြားရွေးချယ်စရာလှုံ့ဆော်မှု drives တွေကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ပြဋ္ဌာန်းများအတွက်သင့်လျော်သောလှုံ့ဆော်မှု drives တွေကိုပိုဦးစားပေးနေပြီနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းနိုင်စွမ်းယန္တရားများပါဝင်သင့်တယ်36, 38).
Translational မှ neuroscience သည်ဤသီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစား supporting neurobiological သက်သေအထောက်အထား generate မှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးမှလှုံ့ဆျောမှု၏အရေးပါမှုကိုဦးနှောက်သိသိသာသာဝေမျှတဲ့ hierarchical ခန္ဓာဗေဒနှင့်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားအလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကအောက်ပါ, ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်မော်တာ "output ကို" အဆောက်အဦများ (အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ရသော prefrontal cortex နဲ့ ventral striatum ပတျသကျတဲ့မူလတန်းကျောင်းလှုံ့ဆျောမှု circuitry ၏တည်ရှိမှု, အကြံပြု37) ။ ဤသည် anterior စနစ်ကမူလတန်းလှုံ့ဆျောမှုဆားကစ်သို့စုဆုံတိုက်ရိုက် axon Project (ဖွငျ့အာရုံခံ "input ကို" အချက်အလက်များ၏နည်းလမ်းအဖုံဖုံကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ဦးထက်ပိုကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် posteriorly တည်ရှိပြီးအလယ်တန်းလှုံ့ဆျောမှု circuitry ကထောက်ခံနေသည်ပုံ 1()39-41) ။ ဥပမာ, hippocampus နှင့် amygdala (စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုမှသက်ဆိုင်ရာဆက်စပ် memory နဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေသတင်းအချက်အလက်များသည်31, 39, 42, 43), hypothalamic နှင့် septal အရေးပါထိုကဲ့သို့သောအာဟာရစားသုံးမိပါ, ကျူးကျော်များနှင့်မျိုးပွားမှုတုံ့ပြန်မှု (အဖြစ်စရိုက်သို့မဟုတ်ထူးခြားသောမွေးရာပါလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုမှသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ပေးစဉ်44).
Impulse အတွက်ပါဝင်ဗိုလ်မှူးလှုံ့ဆော်ဦးနှောက် Circuitry Putatively, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုပြဿနာa
မကြာသေးမှီကတွေ့ရှိချက်များကိုလှုံ့ဆော် drives တွေကိုသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာလှုံ့ဆော်မှု drives တွေကို (မျိုးစုံကိုရှုထောင့်ဝှက်စေခြင်းငှါပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအာရုံခံ၏လူဦးရေများအဖြစ်မူလတန်းလှုံ့ဆျောမှု circuitry သွင်ပြင်လက္ခဏာများ45) ။ ဤရွေ့ကားကိုယ်စားပြုသည့် thalamus မှ (အနျူကလိယဟာ ventral globus pallidus မှ accumbens) ကို ventral striatum ဖို့ prefrontal cortex ကနေအမှတ်စဉ် axon စီမံကိန်း၏အပြိုင်ကွင်းအားဖြင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်အာရုံခံ ensembles အကြားပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည် cortex မှ (46, 47()ပုံ 1 နှင့် ပုံ 2) ။ cortical-striatal-thalamic-cortical ကွင်းအဆိုပါ prefrontal cortex (ဥပမာ anterior cingulate, ventromedial နှင့် dorsolateral ဒေသများ) အလှည့်ထဲမှာမှစီမံကိန်းများတွင်အသားအရောင်ခွဲခြားအချို့ကိုဒီဂရီကိုထိန်းသိမ်းရန်သော striatum အတွင်းတိကျသောအခန်းဖို့စီမံကိန်းများ၏တိကျဒသေသောကြောင့်, အပြိုင်အဖြစ်ဖော်ပြနေကြပါတယ် အဆိုပါ cortex ဖို့ thalamus ပြန် (48) ။ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ neurophysiological နှစ်ဦးစလုံးသက်သေအထောက်အထားများကို (striatum ၏ function တိကျတဲ့အခန်းအတွင်းအာရုံခံ ensembles ၏ပစ်ခတ်ပုံစံများအစိတ်အပိုင်းအတွက်တိကျတဲ့ prefrontal cortex ငျဒသေမှာရှိတဲ့ပစ်ခတ်၏ပုံစံများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု42, 49) ။ အလှည့်၌, နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပစ်ခတ်ပုံစံများ, ဤ distal အဆောက်အဦများအတွက်မူမမှန်စိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးမမှန် (နှစ်ဦးစလုံးထုတ်လုပ်ရန်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည် hippocampus နှင့် amygdala ကနေ glutamatergic သွင်းအားစုကလွှမ်းမိုးထားပါသည်50) ။ striatal လူဦးရေ premotor နှင့်မော်တာ cortical နှင့် brainstem မော်တာစင်တာများအပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ကြောင့်, သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကပိုတိုက်ရိုက် (စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာ output ကိုဆုံးဖြတ်သည်39, 44) ။ γ-aminobutyric အက်ဆစ်၏သိပ်သည်း collection များကို (ဂါဘမြို့သား) က striatum အတွက် -ergic inhibitory အာရုံခံကွန်ပျူတာအဆောက်အဦလုပ်ကွက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းအခြားရွေးချယ်စရာပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများကျယ်ပြန့်နံပါတ်များကိုဝှက်ဖို့ဒေသခံအာရုံကြောကွန်ရက်များ၏မြင့်စွမ်းရည်ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များကြောင်းကိုမှုများထပ်တလဲလဲအာမခံတားစီးအားဖွငျ့ဆကျသှယျ မျိုးစုံ, အလွန်အမင်းအသေးစိတ်ရှင်းလင်းလှုံ့ဆော် drives တွေကို (၏39, 47, 51-67).
မူလတန်းလှုံ့ဆော် Drives ၏ကိုယ်စားပြုမှုအတွက်ပါဝင် Motivation Circuitry နှင့်လှုံ့ဆော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ Neurocomputational ပွဲများနှင့်အပြုအမူပယောဂအတွင်းမှာပဲ cortical-Striatal-Thalamic-cortical loopa
သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းအခြားရွေးချယ်စရာလှုံ့ဆော်မှု drives တွေကို၏ neurocircuitry encoding က repertoire ဦးစားပေးများနှင့်အမူအကျင့်အရေးယူဘို့လှုံ့ဆော် drives တွေကို select လုပ်ကြောင်း neurobiological ဖြစ်ရပ်များမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အထူးသဖြင့်အာရုံကြောအလွှာ (ပြဋ္ဌာန်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးပွားလာ) မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု drives တွေကိုဟန့်တားနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ Impulse နှင့်စှဲမျိုးပေါင်းအပါအဝင်စိတ်ခွန်အားနိုး repertoire ၏နှောင့်အယှက်, အရှင်လေ့ (ဆင်းရဲသားတို့ကိုညှိနှိုင်းသို့မဟုတ်မူလတန်းလှုံ့ဆျောမှု circuitry ဖို့အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ် inhibitory အာရုံကြောစနစ်များပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ41, 52) ။ ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ, neuroimaging လေ့လာမှုများ (ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ pharmacological လုပ်ဆောင်ချက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဘုံ subcortical-striatal ဒေသများနှင့် prefrontal cortex ဆက်စပ်. အ53) ။ နောက်ထပ်ဒီအယူအဆစူးစမ်းဖို့, မြှင့်တင်ရေးနှင့် inhibitory လှုံ့ဆျောမှုအလွှာ characterizing ဒေတာ, ဖော်ပြထားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နေစဉ်ယင်းလမ်းကြောင်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများပြန်လည်သုံးသပ်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပါလိမ့်မည်။
ပရိုမိုးရှင်း Motivation အလွှာ
အဆိုပါ striatum သို့ Dopamine လွှတ်ပေးရန်အရေးယူသို့ encoded လှုံ့ဆော်မှု drives တွေကို၏ဘာသာပြန်ချက်ထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရတဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီး neuromodulatory အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်, အထွေထွေတူသော operating (signal ကို "သွားပါ"54) ။ အဆိုပါ ventral striatum (နျူကလိယ accumbens) နှင့် dorsal striatum (caudate putamen) သို့ Dopamine လွှတ်ပေးရေး (အသီးသီး, အ ventral tegmental ဧရိယာနှင့် substantia nigra အတွက် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်သော cortex နှင့်အခြားဒေသများထံမှ excitatory အချက်ပြမှုများအားဖြင့်တော်ကိုနှိုးဆော်နေသည်55, 56()ပုံ 1) ။ သို့သော် ventral နှင့် dorsal ကဏ္ဍများ premotor အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ pathogenesis အတွက်စိတ်မချရသည့် dorsal striatum သို့ Dopamine လွှတ်ပေးရန်, အဓိကအားဖြင့် (ထို Initiative နှင့်စီးဆင်းမှုကွန်ကရစ်မော်တာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လေ့အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်57) ။ ဆနျ့ကငျြဘမှာနျူကလိယသို့ dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens (စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှု, ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုလာဘ်, premotor သိမှတ်ခံစားမှု (အတွေး) နှင့်အသစ်သောအပြုအမူ၏သင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်43, 46, 58) ။ dopamine လွှတ်ပေးရန်အရေးယူသို့အတွေး၏ဘာသာပြန်ချက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ထားတဲ့အတွက်တိကျသောထုံးစံမသိနိုင်ပါဘူး။ တချို့ကအလုပ် (dopamine ဥတုတိုက်ရိုက်နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံခံ ensembles ၏ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် glutamatergic အဆိုပါ cortex ဆီက input, amygdala နှင့် hippocampus သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုကွောငျးဖျောပွသ51, 59()ပုံ 2B) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အာရုံခံ, အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်ဆက်စပ်မှတ်ဉာဏ်သတင်းအချက်အလက်, လှုံ့ဆော်မှု drives တွေကိုကိုယ်စား၏မျိုးဆက်မှဦးဆောင်, (မြစ်အောက်ပိုင်းမော်တာစင်တာများတိကျတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးသတင်းအချက်အလက်အပျေါမှာလကျခံနှင့်ပြုမူနိုင်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့်န့်သတ်ထားထားပြီးကြောင်းအကြံပြု51, 59, 60) ။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါ prefrontal cortex, amygdala, ဒါမှမဟုတ် hippocampus ၏ neurotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေး pharmacological ဆွခြင်းဖြင့်တော်ကိုနှိုးဆော်အပြုအမူ repertoire (ပြောင်းလဲ61-63).
စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားစွဲလမ်း, သဘာဝဆုလာဘ် (အစားအစာ, လိင်, သို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်များကို), ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အခြေအနေများ (ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား) (နီကိုတင်း, အရက်, ကင်း, စိတ်ကြွဆေး, opiates, ဆေးခြောက်အပါအဝင်) မူးယစ်ဆေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏ pharmacological လုပ်ရပ်များပါဝင်သည် သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (43, 64-67) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအသိပညာဆုလာဘ်အရင်းအမြစ်များ၏ထိရောက်ဝယ်ယူဘို့အရေးကွီး၏, ထိုအမည်မသိရှာစူးစမ်းဖို့ drive ကိုအားကောင်းတဲ့မူလတန်းလှုံ့ဆျောမှု (သူ့ဟာသူဖြစ်ပါသည်43) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအသစ်အဆန်း (ventral-striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြောခြင်းငှါ68) နှင့်, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးနဲ့တူ, (ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် locomotor အပြုအမူကိုထုတ်လုပ်69) ။ ခန့်မှန်းရခက်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု၏ပုံစံအတွက်တင်ပြအသစ်အဆန်း, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်, အထူးသဖြင့် (လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်70) ။ , ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကျပန်း, ဒါမှမဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲဖက်ရှင်တွေအတွက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဆုလာဘ်များ (dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်နှင့်ဆုလာဘ်-အေးစက်အပြုအမူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်မှုတွေကျော် သာ. ကြီးမြတ်စွမ်းရည်ရှိ71, 72) ။ ဆနျ့ကငျြ, မျှော်မှန်းထားသည်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်အောက်တွင်ဖျော်ဖြေအများအပြားကောင်းမွန်စွာသင်ယူလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေသို့မဟုတ်အလေ့အထ dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens နျူကလိယအပေါ်လျော့နည်းမှီခိုဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကကမကထပြုခဲ့ dopamine စနစ်များတိုက်ရိုက် pharmacological ဆွတူတဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အဆန်း၏သဘာဝစိတ်ခွန်အားနိုး-encoding ကဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူများ၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။
နျူကလီးယပ်အတွက် glutamatergic afferent လှုပ်ရှားမှု accumbens နှင့်နျူကလိယ၏အခ်ါဂါဘမြို့သား-ergic လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံ accumbens အတူတကွနှင့်အတူ dopamine ၏ဒုတိယအရေးကြီးသော function ကို, အနာဂတ်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု drives တွေကိုရွေးချယ်ခြင်းဦးစားပေး၏ပြဌာန်းခွင့်ပါဝငျသညျ။ ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုများတွင်အနာဂတ်အပြုအမူနျူကလိယအတွက် neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖွငျ့ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်အတိတ်အတွေ့အကြုံများအရသိရသည် shaped ဖြစ်ပါတယ် (အာရုံခံ accumbens73) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ထပ်ခါတစ်လဲလဲမူးယစ်ဆေး-တော်ကိုနှိုးဆော် dopamine လွှတ်ပေးရေး (intracellular အဲဒီ receptor အချက်ပြလမ်းကြောင်း, မျိုးဗီဇစကားရပ်နှင့်ဆယ်လူလာဗိသုကာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆယ်လူလာပရိုတိန်းပြောင်းလဲမှုများ induces15) ။ နျူကလီးယပ် accumbens မှထုတ်လုပ်တဲ့နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex ဒေသများတွင် Dopamine ဂီယာ (အာရုံခံ dendritic သစ်ပင်များရေရှည်အလားအလာများနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုများအပါအဝင်သင်ယူမှုနှင့် plasticity ၏ယန္တရားထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး74-77) ။ ကြောင်းဆုလာဘ်အခြေအနေတွင်အကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ကြောင့်ဤရွေ့ကား neuroplastic ဖြစ်စဉ်များ (ကဆုလာဘ်နှင့်အတူဆက်စပ်စိတ်ခွန်အားနိုး drive ကို ပို. ပို. အားကောင်းဖြစ်လာမထွက်ရအမူအကျင့် sensitive ကအခြေခံစခွေငျးငှါ78, 79) ။ အသိမြှအခြားကုဒ်သွင်းစိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်ဆွေမျိုးနှင့်အတူဆက်စပ်စိတ်ခွန်အားနိုးဦးစားပေးအနေနဲ့တိုးအဖြစ်, ( ပို. ပို. compulsive ဖြစ်လာကြောင်းဆုလာဘ်-တိကျတဲ့ဝယ်ယူအပြုအမူကိုထုတ်လုပ်78) ။ ဒီထုံးစံ၌, dopamine စနစ်များလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးချင်းစီ၏စိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကိုများ၏ repertoire ကျဉ်းမြောင်းသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ရေရှည် function ကိုအစေခံစေနိုင်သည်။
Inhibitory Motivation အလွှာ
inhibitory စနစ်များ function ကိုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ချို့တဲ့လှုံ့ဆော်မှု drives တွေကိုများ၏ပြဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည် suboptimal သို့မဟုတ်မသင့်လျော်ယူဆ။ ထိုသူတို့တွင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ထို serotonin (5-HT) neurotransmitter စနစ်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး circuitry ၏ prefrontal cortex အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်ပုံ 1) ။ လျော့နည်းသွားဦးနှောက် 5-HT လှုပ်ရှားမှု၏ဆောင်ရွက်ချက်များ (အပြင်နဲ့ Self-ညွှန်ကြားအကြမ်းဖက်မှု, သတ်သေမီးစတင်များနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအပါအဝင်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်80-82) ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက် 5-HT စနစ်များ Pharmacological ဒဏ်ရာ (ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအတွက်တုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောများတွင်ရလဒ်များ83) ။ ပြောင်းပြန်လိုလားသူ serotonergic အေးဂျင့် (တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတွေအတွက်လူမှုရေးကျူးကျော်ခြင်းနှင့် Impulse လျော့84, 85) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်အဘို့အယန္တရားများအပြည့်အဝရှင်းလင်းရသေးသော်လည်း, ventral tegmental ဧရိယာ, နျူကလိယ accumbens, prefrontal cortex, amygdala နှင့် hippocampus အပါအဝင်စိတ်ခွန်အားနိုး circuitry ဖို့ midbrain raphae အရေးပါထံမှ 5-HT Project,, (ပါဝင်ပတ်သက်ပေါ်လာ55, 86).
Prefrontal cortex function ကိုရှည်လျားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အဖြစ်အစောပိုင်း 1848 အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း, ventromedial prefrontal cortex မှအပျက်အစီးအကျိုးသက်ရောက်စေမတည်ငြိမ်မှု, ဆင်းရဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်လူမှုရေးတွေကို (ရန်လျစ်လျူနှင့်ဆက်စပ်နေရာအနှံ့စိတ်ခွန်အားနိုး Impulse ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်87) ။ ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နောက်ပိုင်းတွင်မြောက်မြားစွာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအခြေအနေများ (ဥပမာ antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ, အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်, schizophrenia, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်, စိတ်ဖောက်ပြန်နှင့်စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာ) prefrontal cortex function ကို၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအတိုင်းအတာအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ (အစီရင်ခံထားသည်26, 30, 88-90).
Prefrontal cortex မူမမှန်ဖြစ်နိုင်သည်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့စိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုများပတျသကျ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများ (မြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ comorbidity အတူမကြာခဏ prefrontal cortex နဲ့ပတ်သက်တဲ့, စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာတစ်ခုအသင်းအဖွဲ့သရုပ်ပြနှင့်တစ်ဦးတည်းကဤအချက်များဖြစ်စေစတင်ခြင်းအခြားများအတွက်အန္တရာယ်တိုးပွါးကြောင်းအကြံပြု91-93) ။ nonspecific etiology ၏ prefrontal cortex ၏ functional သို့မဟုတ်ခန္ဓာဗေဒမူမမှန်လည်းလေ့ (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူဦးရေအတွက်ဖော်ထုတ်နေကြ94-97) ။ ဤအလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှသက်ဆိုင်ရာ, ကြွက်များတွင် prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည် Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုတိုးပွားနိုင်ပါတယ် (98, 99).
corticostriatal interaction က၏စုံစမ်းစစ်ဆေး Impulse နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်နှစ်မျိုးလုံးကိုထုတ်လုပ် prefrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ယန္တရားအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral tegmental ဧရိယာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု dopamine လွှတ်ပေးရန်, အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်နှင့် neuroplastic ဖြစ်စဉ်များဖို့ prefrontal cortex ကနေ Excitatory glutamatergic Project (39, 100, 101) ။ ဤရွေ့ကားခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ချိတ်ဆက်သည့် prefrontal cortex ဟာကိုယ်စားပြုမှု, သေဒဏ်စီရင်သဖြင့်, နျူကလိယ accumbens အတွက်ပစ်ခတ်အာရုံကြော ensemble ၏ပုံစံများလွှမ်းမိုးနေဖြင့်စိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကို၏တားစီးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နျူကလီးယပ် accumbens ဖို့ prefrontal cortex သို့မဟုတ်ယင်း၏သွင်းအားစုများ၏အပေးအယူ 1) ကနျူကလိယ accumbens အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုး drive ကိုရှေးခယျြစရာကိုယ်စားများ၏အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပစ်နိုင်, 2) နျူကလိယကိုဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်မှုပုံစံများပြောင်းလဲ dopamine ရောက်လာခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည် "သွားပါ" signal ကိုမှအာရုံခံ ensembles accumbens , ပုံမှန်အားဖြင့်ကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုနေဖြင့်မသင့်လျော်ယူဆလှုံ့ဆော်မှု drives တွေကိုများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုလျော့ကျမယ်လို့သောနျူကလိယ accumbens အတွက် neuroplastic ဖြစ်စဉ်များအယှက်) အထူးသဖြင့်လှုံ့ဆော် drives တွေကိုနှင့် / သို့မဟုတ်3၏ပြဋ္ဌာန်းပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ရရှိလာတဲ့။ ညံ့ဖျင်းသော prefrontal cortex function ကို, မသက်ဆိုင်သည့်တိကျသောရောဂါဗေဒ၏, ထကြွလွယ်သောအဖြစ်ဆေးခန်းကြည့်ရှုအားပေးမသင့်လျော်လှုံ့ဆော်မှု drives တွေကိုဖျော်ဖြေများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် prefrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှု 1 ဖြစ်ပေါ်စေမည်) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် / သို့မဟုတ်2၏ prodopamine သက်ရောက်မှုများကထောက်ပံ့ပေးဦးစားပေးစိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်တိုက်ရိုက် encoded မှဆုလာဘ်) (ရှာကြံ compulsive မူးယစ်ရန်စိတ်ခွန်အားနိုးထိခိုက်စေမယ့် switch ကိုအခြေခံဆေးဝါး neuroadaptive သက်ရောက်မှုတစ်ခုအမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါတိုးတက်မှု102, 103) ။ ထိုကဲ့သို့သောအမျှအားကောင်းတဲ့မြှင့်တင်ရေးလှုံ့ဆျောမှုစနစ်များလှုပ်ရှားမှု၏ setting ကိုအတွက် inhibitory စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များဆွေမျိုးချို့ယွင်းလေ့ Impulse နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေများမှဦးဆောင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Neurodevelopmental အပြောင်းအလဲများကိုမြင့်စွဲအားနည်းချက် generate နိုင်ဘူး။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလှုံ့ဆော် Neurocircuitry ၏ရင့်ကျက်
လေးနက်တဲ့ psychophysiological ပြောင်းလဲမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက် ( ပို. ပို. သိမြင်တူသော-အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်စိတ်ခံစားမှုစတိုင်များဆည်းပူး104, 105) နှင့် ပို. ပို. (အရွယ်ရောက်ပြီးသူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ဖြစ်လာ106) ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာတော့ကစားရန်စိတ်အားထက်သန်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုထိခိုက်ရလဒ်များ (minimize လုပ်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် nonparticipatory သင်ယူမှုကိုအားပေးအားမြှောက်43) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့ကစားရန်စိတ်အားထက်သန် (ဆုံးဖြတ်ချက်ချလမ်းပြ Contextual အတွေ့အကြုံအသိပညာ၏အကျိုးကျေးဇူးများခြင်းမရှိဘဲ, ဝတ္ထုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွေ့အကြုံတွေကိုအတွင်းပါဝင်မှုမှဖြစ်စဉ်များ107) ။ လူကြီးရှုထောင့်ကနေအသစ်အဆန်း-မောင်းနှင်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူဆင်းရဲသောသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်၏ပုံရသည်နှင့်ထကြွလွယ်သောစခွေငျးငှါ (34, 35).
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းမူလတန်းလှုံ့ဆျောမှု circuitry အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပွောငျးလဲအသစ်အဆန်း-ရှာကြံအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်နှင့်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များတိုးပွားစေနိုင်သည်။ အလယ်ပိုင်း dopamine function ကိုပါဝင်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်သည်ဤအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံများလိုက်နာပါ။ dopamine လှုပ်ရှားမှုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ကုသနေကြပါပြီမမှန်, နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အများဆုံးဖြစ်ကြပြီးလူကြီးအတွက်ငွေလွှဲလေ့ (108) ။ ဆနျ့ကငျြ, လစ်လပ် dopamine function ကိုပါဝင်သောပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု, (တိုးတက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွါး57) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ယေဘုယျဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ themes များရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း (dopamine စနစ်များ function ကိုပါဝင်သောအနီးအနားဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖေါ်ပြခြင်းတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည်109) ။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက် (ကဝတ္ထုပွင့်လင်းသောလယ်၌ကြီးထွားရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူကိုပြသခြင်းနှင့်အငယ်နှင့်အထက်ကြွက်များထက်လူမှုရေးပြဇာတ်တွင်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံ110) ။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်သူတို့ရဲ့ dopamine စနစ် (pharmacological စိန်ခေါ်မှုမတိုင်မီပိုမိုနီးကပ်စွာတစ်ဦး functional ဖြစ်စေမျက်နှာကျက်မှအခြေခံမှာလည်ပတ်ကြောင်းအကြံပြု, dopamine ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှ prodopaminergic အေးဂျင့်များနှင့် hypersensitivity မှမော်တော် hyporesponsivity ပြသ110) ။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ထက်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သောအခြေခံ preference ကိုပြသ111) ။ စိတ်ကြွဆေးကုသမှုပေါ်၌လူကြီးများ (အစားယခင်ကစိတ်ကြွဆေးပေးပို့အတူတွဲဟာအကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ပိုနှစ်သက်, အသစ်အဆန်းဦးစားပေးများတွင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အနီးအနားမြီးကောင်ပေါက်ပြပွဲလျှောက်လျော့နည်းပြသ111) ။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက်ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant ထိုးပြီးနောက် သာ. ကြီးမြတ်အပြုအမူထိခိုက်စေ striatal dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုပြသ112, 113) ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်များစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များနှင့်အားနည်းချက် dopamine စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပါဝင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
promotivational dopamine စနစ်များနှင့် inhibitory 5-HT စနစ်များအတွက်ရင့်ကျက်ကွဲပြားခြားနားမှုဆယ်ကျော်သက်အသစ်အဆန်းရှာ / Impulse အထောက်အကူပြုပေမည်။ dopamine ၏ CSF ပြင်းအားနှင့် 5-HT metabolites (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းကျဆင်းခြင်းနှင့်အသက်အရွယ် 16 အားဖြင့်အနီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်မှလျော့114) ။ 5-HT လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရန် dopamine တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းအကြံပြုခြင်းအဆိုပါ 5-HT metabolite 5-hydroxyindole-acetic acid ကိုတိုးဖို့ dopamine metabolite homovanillic အက်ဆစ်၏သို့သော်အချိုးအစား, (114) ။ မျောက်ခုနှစ်, dopamine axon input ကို၏သိပ်သည်းဆခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကြောင်းသုံးလှနျးတငျသောအခါနှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်မှအသက်6လအတွင်းမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်၏တတစ်ဝက်ကနေ prefrontal cortex တိုးအတွက် dopamine-ဆောင်သော presynaptic နောက်ဆုံးတွင်၏သိပ်သည်းဆ (2 နှစ်), 5-HT (၏115) ။ ဆနျ့ကငျြ, prefrontal cortex အာရုံခံအပေါ် 5-HT ထုတ်လုပ်မှုက်ဘ်ဆိုက်များ (ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ဒုတိယအပတ်ကနေဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့115) ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် inhibitory 5-HT စနစ်များထက် promotivational dopamine စနစ်များကိုပိုမိုလှုပ်ရှားမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။
အလယ်တန်းလှုံ့ဆျောမှု circuitry ထိခိုက်ဆယ်ကျော်သက်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကိုလည်း dopamine စနစ်များ promotivational လည်ပတ်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ လေးနက်တဲ့ neuroplastic သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေလိင် Steroid တစ်မျိုး receptors မြင့်မားခြင်း (hippocampus နှင့် hypothalamus အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်116, 117) ။ အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း Neuroplastic တည်းဖြတ်မူ (မူလတန်းလှုံ့ဆျောမှု circuitry အတွက်ကိုယ်စားပြုစိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကို၏သဘောသဘာဝပြောင်းလဲနေတဲ့အဲဒီအဆောက်အဦထဲမှာ Contextual စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုကိုယ်စားပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါ118, 119) ။ ဥပမာအားဖြင့်, လိင်ဟော်မုန်းအတွက် surges ( သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုမှ sensitivity ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကျူးကျော်ရန်အထောက်အကူ43, 120, 121).
Hippocampal function ကိုအသစ်အဆန်း-oriented အပြုအမူအတွက်လိင်-ဟော်မုန်း-related အပြောင်းအလဲများကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ cortex နှင့်အတူကျယ်ပြန့်ဆက်သွယ်မှုအားဖွငျ့, အ hippocampus (အတိတ်အမှတ်တရများနှင့်အတူချက်ချင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခင်းအကျင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အဆန်း detect လုပ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်122) ။ Results သတင်းအချက်အလက်ကို (နျူကလိယသို့ dopamine ဥတု၏လွှဲခွင်သို့မဟုတ်သက်ရောက်မှု၏ hippocampal စည်းမျဉ်းအားဖွငျ့စိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကိုထဲမှာကုဒ်သွင်း accumbens ဖြစ်လာပါသို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens ၏အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်နိုင်ပါတယ်51, 123, 124) ။ ဒါဟာအယူအဆ (hippocampal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖို့နျူကလိယ accumbens နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသို့အရေအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပွောငျးလဲကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်69) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာအသက်တာ၏တိကျသောအဆင့်ဟော်မုန်းအခြေအနေများ (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, လူကြီး) ကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်ဆုံးသပ္ပါယ် orient အပြုအမူမှ promotivational dopamine စနစ်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်တစ်ဦးယန္တရားအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းလှုံ့ဆျောမှုအလွှာအတွက်အပြောင်းအလဲများအတွက် prefrontal cortex အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌, prefrontal cortex သေး Impulses သတင်းပို့တားစီးရန်၎င်း၏စွမ်းရည်များပါဝင်သည်စခွေငျးငှါသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးကို A မြင့်ဆုံးသေးပါဘူး။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြေရှင်း, စိတ္တဇစဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်ယုတ္တိစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်အပါအဝင် prefrontal cortex function ကို၏ဆောင်ရွက်ချက်များ, (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်104, 105, 125) ။ psychomotor တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့စွမ်းရည် (နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားဖြင့် peaking, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှတဆင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်126), ဆယ်ကျော်သက် Impulse (ဥပမာဆုံးဖြတ်ချက်ချ) ၏ပိုပြီးတိုက်ရိုက်အစီအမံအကြီးအကျယ် unexplored ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒနဲ့ function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများသိမြင် function ကိုပြောင်းလဲဖို့ယာယီကိုက်ညီတဲ့။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုမှ cortical လှုပ်ရှားမှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုများ EEG အစီအမံအတွက်အပြောင်းအလဲများကို (ရှုလေ့လာကြသည်104, 127) ။ အသက်အရွယ်6မှစ. 12 ဖို့, ဦးနှောက်အသံအတိုးအကျယ်မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle များ၏အချိုးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲ; ဒါဟာထို့နောက် (12 မှအသက်အရွယ်မရွေး 18 ကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးပွါး128) ။ (အသက်အရွယ်မရွေး4မှစ. 17 ငှါ, တိုကျရိုကျ cortex အတွက်အဖြူကိစ္စသိပ်သည်းဆအတွက်တိုးတက်သောတိုးမှုကြောင့်အာရုံခံခြင်းနှင့် axon ချင်း၏တိုးပွားလာ myelination ဖွယ်ရှိရှိ၏နှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအလားအလာဝါဒဖြန့်၏တိုးမြှင့်ထိရောက်မှုမှပံ့ပိုး129) ။ ပြောင်းလဲ neuroplasticity နှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ထင်ဟပ်ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်အတွက်အပြောင်းအလဲများလည်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ တကမ္ဘာလုံး, ဦးနှောက်အသက်အရွယ်2အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ထက် သာ. ကြီးမြတ်နှစ်ဆမှတိုးမြှင့်, အသက်9အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ကိုက်ညီ, စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုတိုးပွါးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အဆုံး (အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်မှကျဆင်းနေ130, 131) ။ subcortical ဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် cortical ဒေသများဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းဆင်တူပေမယ့်ပိုပြီးသိသာယာယီအတက်အကျကိုခံယူခြင်းနှင့်တိုကျရိုကျ cortical ဒေသများ (နောက်ဆုံးဖက်ပြောင်းနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်ဤပြောင်းလဲပြ131).
dendritic ဖြစ်စဉ်များ၏သိပ်သည်းဆ synapses နှင့် myelination, အာရုံခံအမြှေးပါးပေါင်းစပ်၏နှုန်းထားများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသိမြင်မှုစတိုင်များ၏ပေါ်ပေါက်ရေးအားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း prefrontal cortex အတွက်စုစုပေါင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့် paralleled နေကြတယ်129, 132-134) ။ တိုကျရိုကျနှင့်အခြား cortical ဒေသများတွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကျဆင်းမှုလျှော့ချထိထိရောက်ရောက်အတွေ့အကြုံကိုစုဆောင်းနှငျ့ပတျသကျသောသတငျးအခကျြ transmit မစွမ်းအင်စားသုံးအာရုံခံဆက်သွယ်မှုအတွက်လုပ်နေကြတယ်မထွက်ရ Synaptic တံစဉ်များကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ လူ့ prefrontal cortex များတွင်အဓိက axon ဧည့်ခံဇုန်အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆ 17 × 10 မှတိုးပွါး8 မီလီမီတာနှုန်း3 1 နှင့်5၏အသက်အရွယ်အကြားနှင့် 11 × 10 ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ပယ်ချ8 မီလီမီတာနှုန်း3 (နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားဖြင့်135) ။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်မျောက်တွေကို Synaptic တံစဉ်များကို (သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်တိကျသောသက်ရောက်မှုများပြ cortical microarchitecture ၏အစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်134) ။ prefrontal cortex synapses အတွက်လျှော့ချဒေသခံ cortical ဒေသများထံမှထက်ဝေးလံတဲ့အသင်းအဖွဲ့ cortical ကနေ axon ၏သူတို့အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြပြီးအလွန်အမင်းလုပ်ငန်းများ၌ multimode သတင်းအချက်အလက် (အပေါ်ဒေသခံ prefrontal cortex ဆားကစ်၏မှီခိုတစ်ဦးဆွေမျိုးတိုးရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အဆိုပြုထားပါသည်125) ။ ဒီ feature (ဝေးကွာသောအဆောက်အဦများထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အတိတ်ကအတွေ့အကြုံပိုကြီးတဲ့, ပိုပြီးခေတ်မီ repertoire သာ. ကြီးမြတ်ကွန်ပျူတာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်မထွက်ရ, အထက်မှအောက်သို့အပြောင်းအလဲနဲ့ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ134) ။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို Synaptic တံစဉ်များကို excitatory နှင့် inhibitory သွင်းအားစု (နှစ်ဦးစလုံးလျော့ကျ136) ။ ဤရွေ့ကား counterbalanced လျှော့ချ (cortical အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ137) နှင့် prefrontal cortex အာရုံခံ၏ ensembles တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်, ဖျော်ဖြေပွဲဖက်ရှင်အတွက်မီးများအတွက်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန် (134, 138), သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုတိုးပွားလာပမာဏ၏ရေတိုရေရှည်သိုလှောင်မှုဆောင်ရွက်မှုတွေ။ ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမျောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာ (task ကိုရဲ့နှောင့်နှေးကာလအတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်း prefrontal cortex အာရုံခံ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူအပြုသဘောကိုက်ညီ139).
အာရုံကြောကွန်ယက်ကို Simulator (neuroplastic ပြောင်းလဲမှုနှုန်းလျော့ကျဖို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်မှကျဆင်းလာသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကလေးဘဝအတွက် cortical interconnectivity အတွက်တိုးအလားအလာသင်ယူ optimization ထင်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြု125, 140) ။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များကိုအသုံးပြုရန်ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်သတင်းအချက်အလက်သစ်များသင်ယူအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့နိုင်စွမ်းအကြားကုန်ချင်းလဲလှယ်ယခင်က (သတင်းအချက်အလက်သင်ယူဆုံးဖြတ်ရန်140) ။ Synaptic ဆက်သွယ်မှုများ၏အရေအတွက်အားဖြင့်ကိုယ်စားပြုအဖြစ်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်နှုန်းထားများသင်ယူခြင်း, အာရုံကြောကွန်ရက်များအတွင်းဆက်သွယ်မှုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့, ဒါမှမဟုတ် neuroplasticity များအတွက်စွမ်းရည်အတိုင်း, ယခင်ကသင်ယူသတင်းအချက်အလက် (ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လည်ပတ်တဲ့စနစ်ရရှိလာတဲ့, လျော့သင့်တယ်140) ။ Synaptic တံစဉ်များကိုနှင့်ဝတ္ထုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွေ့အကြုံများဆီသို့ သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကိုနှင့်အတူ concomitant အဆိုပါ prefrontal cortex အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ, ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ပို. ပို. ခေတ်မီသိမြင်မှုနှင့်သိမှုဆိုင်ရာအာရုံနားလည်မှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဝယ်ယူအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ရင့်ကျက်, အရှင်နောက်ဆုံးမှာပိုပြီး "သင့်လျော်သော" ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ပြဋ္ဌာန်းလမ်းညွှန်ကြောင်းအတွေ့အကြုံကို-based လှုံ့ဆျောမှုမှအဓိကဦးဆောင်, ဝတ္ထုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဲ့သို့အတွေ့အကြုံများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်စိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကိုအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment နု inhibitory အလွှာ၏ setting ကိုအတွက်ပရိုမိုးရှင်းလှုံ့ဆျောမှုအလွှာ၏အတော်လေး သာ. ကြီးမြတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် function ကိုပြောင်းလဲမှုများပါဝငျသညျ။ တစ်ဦးနု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် coupled ဝတ္ထုအတွေ့အကြုံများအဘို့ သာ. ကွီးမွတျစိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကို, စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးကြမ်းတမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင်ထကြွလွယ်သောလုပ်ရပ်များနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှ predispose နိုင်ဘူး။ အလားတူပင်လေ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူ comorbid စိတ်ရောဂါရောဂါမကြာခဏ putatively စိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry ၏နာတာရှည်လစ်လပ် inhibitory နှင့် / သို့မဟုတ် hyperactive မြှင့်တင်ရေးယန္တရားများထင်ဟပ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ dyscontrol ပါဝငျသညျ။ ပုံမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့စိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry ဤအခြေအနေများပုံနဲ့ဆင်တူတဲ့ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာအဆင့်ခြင်းကိုသည်းခံ။ dopamine စနစ်များအပေါ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးတိုက်ရိုက် pharmacological-စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုစွဲအခြေခံအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကို၏တိုးတက်မှုသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းတိုးမြှင့်အဲဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာယုဂ်စဉ်အတွင်းအရှိန်နိုင်ပါသည်။
ဒီ model ၏အဓိကဆိုလိုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် neurodevelopmental မမှန်ဖွဲ့စည်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူကြီးများပစ်မှတ်ထားသုတေသနနှင့်ကုသရေးပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူအားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြိုးရှိနိုငျသညျ။ (subcortical dopamine နဲ့ prefrontal cortex နဲ့အခြားဆက်စပ်အလွှာအပါအဝင်) ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment လျှက်စိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry ၏တိကျသောအစိတ်အပိုင်းနောက်ထပ်စရိုက်လက္ခဏာတွေကျားမပါဝင်ပတ်သက် discrete ယန္တရားများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မှအားနည်းချက်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-နာမကျန်း-related ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖေါ်လိမ့်မည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ဘို့စိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry နှင့်အန္တရာယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက် psychopharmacology အတွက်အလေ့အကျင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနီးပါး unexplored ဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ် data ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအတှကျအ psychostimulants ၏အသုံးပြုမှုများ၏အစီရင်ခံစာများကနေဆင်းသက်လာအချက်အလက်များ၏အများစုနှင့်အတူတည်ရှိနေ။ တွေ့ရှိချက်များ (တိကျတဲ့ရောဂါရှာဖွေအုပ်စုများသို့မဟုတ်လူမျိုးကွဲအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ဆန့်ကျင်အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုအကြံပြုနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအခြားသူများအတွက်အဘယ်သူအားမျှသို့မဟုတ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများ141-144).
အပိုဆောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဒီ model ၏အဆိုပြုယန္တရားများနှင့်သက်ရောက်မှုတွေစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါမမှန်အပါအဝင်လက်တွေ့အခင်းအကျင်းကိုဖြတ်ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက် Impulse နှင့်အန္တရာယ်အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အထောက်အထား, အားကြီးသောပေမယ့်အများအားဖြင့်ဆက်စပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ချဉ်းကပ်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူညှိနှိုင်းသုတေသနတိုက်ရိုက်အကြံပြုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့လိုတယျ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် Impulse နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ Cross-Section နှင့် longitudinal နှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးရပါမည်။ , မျိုးဗီဇမော်လီကျူး, neurochemical နှင့် neurophysiological နည်းလမ်းများ Impulse နှင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးမှ predisposing စိတ်ခွန်အားနိုး circuitry ၏ဘုံနှင့်ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကဤမော်ဒယ်များမှလျှောက်ထားရပါမည်။ ဇီဝအချက်အလက်များ၏မျိုးစုံလိုင်းများထည့်သွင်း, တစ်ဦးအာရုံကြောစနစ်များအပေါ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်မည်အကြောင်းမူလတန်းစိတ်ခွန်အားနိုး circuitry ၏ Neurocomputational Simulator, အလွယ်တကူ unimodal ဇီဝစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ကိုလေ့လာမဟုတ် Level ။
လေ့လည်းမကြာခဏငယ်ရွယ်လူကြီးပေါ်လာကြောင်းစိတ်ရောဂါအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက် Impulse နှင့်အန္တရာယ်ထုတ်လုပ်ကြောင်းဦးနှောက်ယန္တရား၏အဆိုပြုဖြစ်တည်မှုပေးထားသောကြောင့်) ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန် 1 အဘယ်သို့အတိုင်းအတာဆယ်ကျော်သက်အားနည်းချက်ဆုံးဖြတ်ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏အစောပိုင်းပေါ်ထွန်းခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ် ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်2အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်အပ်နှင်းကြောင်းစိတ်ရောဂါ syndrome) အားလုံးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလူမျိုးကွဲဖြတ်ပြီးကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက်ဒါပေမယ့်စိတ်ရောဂါညှိလူငယ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ပိုမိုအားနည်းချက်ထုတ်လုပ်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ထိုသို့သောတစ်ဦးအနက်တစ်ဦးချင်းထူးခြားတဲ့မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်နှင့်စွဲအားနည်းချက်တစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အဆင့်ကို generate မှဦးနှောက် function ကိုအတွက်ယာယီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့် တွဲဖက်. အလုပ်လုပ်အကာအကွယ်အချက်များ၏တည်ရှိမှုနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မည်။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အခြားရွေးချယ်စရာအချိန်ဇယားနှင့်တကွ, ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်စဉ်အတွင်းဘာသာရပ်များအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်, ဤဖြစ်နိုင်ခြေ၏ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများကိုအကဲဖြတ်မှာစိတ်ရောဂါ၏အတွင်း-ဘာသာရပ်များတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများအပါအဝင်အရေးကြီးသောဖွစျလိမျ့မညျ မမှန်ကိုအသုံးပြုပါ။ longitudinal လက်တွေ့လေ့လာမှုများ, Impulse နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာအလုပ်သမားများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging နည်းပညာများကို အသုံးပြု. ကျန်းမာ Psychiatric နေမကောင်းမြီးကောင်ပေါက်များတွင်အသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးစွဲအားနည်းချက်နားလည်သဘောပေါက်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတန်ဖိုးဖြစ်လိမ့်မည်အထူးသဖြင့်သူတို့အား (31) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်မှမြင့်အားနည်းချက်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်လူမျိုးကွဲများဖော်ထုတ်ခြင်း, သက်သေအထောက်အထား-based တားဆီးကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, နှင့် pharmacotherapeutic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှု၏သနျ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအပျေါမှာပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ကိုလိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒေသများဖြစ်ကြသည်။
Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အပေါ်သုတေသနများအတွက်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ (လူငယ်သုတေသနဆုကို) မှတစ်ဦးစစ်ပြန်အုပ်ချုပ်ရေးအထူးအာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသန Fellowship Grant ကများနှင့်ထောက်ပံ့ငွေများကထောက်ပံ့ထားခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျု (DA-11717, DA-00167), အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (DA -00366), နှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာ။
အဆိုပါစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်မှတ်ချက်တွေအဘို့အဂျော့ခ်ျ Heninger ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1. Impact နဲ့အပြုအမူလေ့လာမှုလောင်းကစား။ ချီကာဂို: ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်, အမျိုးသားထင်မြင်ချက်သုတေသနစင်တာကို; 1999 ။
2. Bucholz KK ။ စွဲလမ်းပုံမမှန်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ comorbidity ၏ Nosology နှင့်ရောဂါ။ စွဲခြင်းရောဂါ။ 1999;22: 221-239 ။
3. အန်သိုနီ J ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုများ၏ Helzer ဂျေ syndrome ။ ခုနှစ်တွင်: Robin ln, Regier DA, အယ်ဒီတာများ။ America မှာစိတ်ရောဂါ Disorders: အဆိုပါ epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာလေ့လာပါ။ နယူးယောက်: Free Press မှ, 1991 ။ စစ။ 116-154 ။
4. ဖြစ်တဲ့ Warner LA က, Kessler RC, Hughes က M, အန်သိုနီ JC, နယ်လ်ဆင်သမဝါယမ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်မှီခိုများ၏ဆက်စပ်မှု: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Comorbidity စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;52: 219-229 ။ [PubMed]
5. Grant က BF ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ DSM-IV အရက်မှီခို၏ဆက်စပ်မှု: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် longitudinal အရက် epidemiological စစ်တမ်း၏ရလဒ်များကို။ J ကိုလုံးအရက်။ 1997;58: 464-473 ။ [PubMed]
6. Kandel DB, ယာမာဂူချီ K ကိုချန်ကေလူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေမူးယစ်ဆေးပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်တိုးတက်မှုအတွက် Stages: အတံခါးပေါက်သီအိုရီအဘို့နောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ J ကိုလုံးအရက်။ 1992;53: 447-457 ။ [PubMed]
7. Wagner အက်ဖ်အေ, အန်တိုနီ JC ။ ဆေးခြောက်, ကိုကင်းနှင့်အရက်တို့အပေါ်မှာမှီခိုမှုအတွက်အန္တရာယ်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလ: ပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေမူးယစ်ဆေးမှီခိုရန်။ Neuropsychopharmacology ။ 2002;26: 479-488 ။ [PubMed]
8. Giovino GA ။ အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်အကြားဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကူးစက်ရောဂါ။ နီကိုတင်းဆေးရွက်ကြီး Res ပျော့ပျောင်း။ 1999;1: S31-S40 ။
9. Breslau N ကို, ဂျွန်ဆင် EO, Hiripi အီး, United States မှာ Kessler R. နီကိုတင်းမှီခို: ပျံ့နှံ့, ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ဇွဲ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;58: 810-816 ။ [PubMed]
10 ။ Helzer je, Burnam MA, McEvoy LT ။ အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခို။ ခုနှစ်တွင်: Robin ln, Regier DA, အယ်ဒီတာများ။ America မှာစိတ်ရောဂါ Disorders: အဆိုပါ epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာလေ့လာပါ။ နယူးယောက်: Free Press မှ, 1991 ။ စစ။ 81-115 ။
11 ။ Taioli အီး, ဆေးလိပ်သောက်လူကြီးအတွက်ဆေးလိပ်သောက်၏ကြိမ်နှုန်းရက်နေ့ကစတင်ခဲ့သောမှာအသက် Wynder အီး Effect ။ N ကို Engl J ကို Med ။ 1991;325: 968-969 ။ [PubMed]
12 ။ အန်သိုနီ JC, Petronis KR ။ အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ၏အန္တရာယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1995;40: 9-15 ။ [PubMed]
13 ။ Kandel D ကို, ချန် K ကိုဖြစ်တဲ့ Warner LA က, Kessler RC, Grant ကခပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်အမေရိကန်လူဦးရေအတွက်အရက်, နီကိုတင်း, ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းအပေါ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှီခို၏ရောဂါလက္ခဏာများ၏လူဦးရေဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1997;44: 11-29 ။ [PubMed]
14 ။ ME Carroll, လက်ခ် ST ။ ဆေးထိုးတဲ့ function ကိုအဖြစ် IV စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု။ Psychopharmacology (Berl) 1997;129: 206-214 ။ [PubMed]
15 ။ Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ΔFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001;98: 11042-11046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Trad PV ။ မြီးကောင်ပေါက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ vicissitudes ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 1994;20: 459-481 ။ [PubMed]
17 ။ Perkonigg တစ်ဦးက, Lieb R ကို, Wittchen Hu ။ အသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာလူငယ်လူကြီးများအကြားတွင်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခို။ EUR စွဲ Res ။ 1998;4: 58-66 ။ [PubMed]
18 ။ Rehm J ကို, Gmel, G, ROOM တွင် R ကို, အရက်သောက်, အရက်သောက်ပုံစံများနှင့်ဥရောပထူထောင်စျေးကွက်စီးပွားရေးအတွက်လူငယ်များအတွက်သေဆုံးမှု၏ဆက်စပ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး၏ Frick U. ပျမ်းမျှအသံအတိုးအကျယ်။ EUR စွဲ Res ။ 2001;7: 148-151 ။ [PubMed]
19 ။ Estroff TW, Schwartz RH အ, ဟော့ဖ်မန်း Ng ။ ဆယ်ကျော်သက်ကင်းအလွဲသုံးစားမှု: စွဲလမ်းအလားအလာ, အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုးကျိုးများ။ Clin ကလေး။ 1989;28: 550-555 ။
20 ။ Kandel DB, United States မှာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်နီကိုတင်းမှီခို၏ချန်ကေအကျိုးသက်ရောက်ခြင်း: 1991-1993 ။ နီကိုတင်းတောဘ Res ။ 2000;2: 263-274 ။ [PubMed]
21 ။ Regier DA, လယ်သမား ME, Rae DS, ဂျွန်လော့ခ် BZ, Keith SJ, Judd ll, Goodwin FK ။ အလွဲသုံးစားမှုအရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း၏ Comorbidity ။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1990;264: 2511-2518 ။ [PubMed]
22 ။ Blanco, C, Moreyra P ကို, Nunes EV, Saiz-Ruiz J ကို, Ibanez အေရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: စွဲသို့မဟုတ်မလှူ။ seminal Clin Neuropsychiatry ။ 2001;6: 167-176 ။ [PubMed]
23 ။ ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုရန် Swadi အိပ်ချ်တစ်ဦးချင်းစွန့်စားမှုအချက်များ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1999;55: 209-224 ။ [PubMed]
24 ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်နှင့်အတူ Zeitlin အိပ်ချ်စိတ်ရောဂါ comorbidity ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1999;55: 225-234 ။ [PubMed]
25 ။ Shaffer HJ ။ နိဒါန်း: လူငယ်လောင်းကစားဝိုင်း။ J ကို Gamble လုံး။ 2000;16: 113-114 ။
26 ။ ရော်ဂျာက RD, Robbins TW ။ နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူဆက်စပ် neurocognitive လိုငွေပြမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ Curr Opin Neurobiol ။ 2001;11: 250-257 ။ [PubMed]
27 ။ Moeller အပြည်ပြည်သွား, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz JM, Swann AC အ။ Impulse ၏စိတ်ရောဂါရှုထောင့်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158: 1783-1793 ။ [PubMed]
28 ။ Evenden JL ။ Impulse ၏အမျိုးပေါင်း။ Psychopharmacology (Berl) 1999;146: 348-361 ။ [PubMed]
29 ။ Vitacco MJ, ဆယ်ကျော်သက် psychopathy ၏ရော်ဂျာ R. ခန့်မှန်း: Impulse, hyperactivity နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို Am Acad စိတ်ရောဂါကုသမှုဥပဒေ။ 2001;29: 374-382 ။ [PubMed]
30 ။ Dervaux တစ်ဦးက, Baylé FJ, Laqueille X ကို, Bourdel MC, Le Borgne MH, Olié JP, Krebs MO ကို။ schizophrenia အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု Impulse, အာရုံခံစားမှုရှာ, ဒါမှမဟုတ် anhedonia မှဆက်စပ်ရှိပါသလား? နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158: 492-494 ။ [PubMed]
31 ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ Bechara အေ Neurobiology: အန္တရာယ်နှင့်ဆုလာဘ်။ seminal Clin Neuropsychiatry ။ 2001;6: 205-216 ။ [PubMed]
32 ။ Petri မိုင်, လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုနှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်၏ Casarella တီအလွန်အကျွံလျှော့စျေး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1999;56: 25-32 ။ [PubMed]
33 ။ Bechara တစ်ဦးက, Dolan S က, Denburg N ကို, သမင်ဒရယ်တစ်ဦးက, Anderson က SW, နေသန် PE ။ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ventromedial prefrontal cortex ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှု, အရက်နှင့်လှုံ့ဆော်ချိုးဖောက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ Neuropsychologia ။ 2001;39: 376-389 ။ [PubMed]
34 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Arnett ဂျေလက်လွတ်စပယ်အပြုအမူ: တစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်။ dev ဗျာ 1992;12: 339-373 ။
35 ။ လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24: 417-463 ။ [PubMed]
36 ။ Dorman ကို C, Gaudiano P. Motivation ။ ခုနှစ်တွင်: Arbib MA, အယ်ဒီတာ။ ဦးနှောက်သီအိုရီများနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက်၏လက်စွဲစာအုပ်။ ကင်းဘရစ်, Mass: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 1998 ။ စစ။ 591-594 ။
37 ။ Kalivas PW, Churchill L ကို, သပ္ပါယ်အပြုအမူအတွက် palladal-thalamocortical ဆားကစ်၏ Romanides အေပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999;877: 64-70 ။ [PubMed]
38 ။ Rolls ET, Treves အေ အာရုံကြောကွန်ယက်များနှင့်ဦးနှောက်ရာထူးအမည်။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1998 ။ မော်တော်စနစ်များ: cerebellum နှင့် Basal ganglia; စစ။ 189-226 ။
39 ။ Pennartz CMA, Groenewegen HJ, လိုပက်ဇ် da Silva FH ။ , အမူအကျင့် electrophysiological နှင့်ခန္ဓာဗေဒအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးပေါင်းစည်းမှု: အဆိုပါနျူကလိယ function ကွဲပြားအာရုံခံ ensembles တစ်ရှုပ်ထွေးအဖြစ် accumbens ။ prog Neurobiol ။ 1994;42: 719-761 ။ [PubMed]
40 ။ Jentsch JD, Roth RH အ, တေလာ JR ။ စိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ကိုမူးယစ်ဆေးအရေးယူဘို့ဂယက်: အ prefrontal corticostriatal စနစ်၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက် dopamine များအတွက်အခန်းက္ပ။ prog ဦးနှောက် Res ။ 2000;126: 433-453 ။ [PubMed]
41 ။ ကုန်သည်များ RA, Potenza MN ။ Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ ခုနှစ်တွင်: Aminoff MJ, Daroff RB, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါအာရုံကြောသိပ္ပံစွယ်စုံကျမ်း။ San Diego မှ, ကာလီဖိုးနီးယား: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; (စာနယ်ဇင်းအတွက်)
42 ။ Groenewegen HJ, Wright CI, Beijer AV စနစ်, Voorn P. Convergence နှင့် ventral striatal သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ၏အသားအရောင်ခွဲခြား။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999;877: 49-63 ။ [PubMed]
43 ။ Panksepp ဂျေ အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
44 ။ Swanson LW ။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏နှောက် hemisphere စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res ။ 2000;886: 113-164 ။ [PubMed]
45 ။ Woodward: D, Chang က J ကို, Janak P ကို, Azarov တစ်ဦးက, အမူအကျင့်ပြည်နယ်များကိုဖြတ်ပြီး Anstrom K. Mesolimbic အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999;877: 91-112 ။ [PubMed]
46 ။ Masterman DL, Cummings က JL ။ တိုကျရိုကျ-subcortical ဆားကစ်: အလုပ်အမှုဆောင်၏ခန္ဓာဗေဒအခြေခံ, လူမှုရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအပြုအမူတွေ။ J ကို Psychopharmacol ။ 1997;11: 107-114 ။ [PubMed]
47 ။ Rolls ET, Treves အေ အာရုံကြောကွန်ယက်များနှင့်ဦးနှောက်ရာထူးအမည်။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
48 ။ Kolomiets ကို BP, Deniau JM, Mailly P ကို, Menetrey တစ်ဦးက, Thierry လေး။ အချက်အလက်များ၏ခွဲခြားမှုနှင့်ဆုံသည့် cortico-subthalamic လမ်းကြောင်းမှတဆင့်စီးဆင်းကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 5764-5772 ။ [PubMed]
49 ။ Chang JY, Janak PH သည်, Woodward DJ သမား။ အာရုံခံခြင်းနှင့်ကြွက်များအားဖြင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း medial prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက်အမူအကျင့် Correlate ။ neuroscience ။ 2000;99: 433-443 ။ [PubMed]
50 ။ ကုန်သည်များ RA, Krystal JK, ကိုယ်ပိုင် DW ။ schizophrenia အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု comorbidity တို့အတွက်တစ်ဦးက neurobiological အခြေခံ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;50: 71-83 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ O'Donnell P ကို, ဂရင်း J ကို, Pabello N ကို, Lewis က BL, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ပစ်ခတ်ဆဲလ်၏ Modulation ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999;877: 157-175 ။ [PubMed]
52 ။ Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ neurobiology ။ seminal Clin Neuropsychiatry ။ 2001;6: 217-226 ။ [PubMed]
53 ။ Breiter HC, အာရုန်ငါ Kahneman: D, Dale တစ်ဦးက, မျှော်မှန်းခြင်းနှင့်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွေ့အကြုံများမှအာရုံခံတုံ့ပြန်မှု၏ Shizgal P. Functional ပုံရိပ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2001;30: 619-639 ။ [PubMed]
54 ။ Panksepp ဂျေ အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ: လူ့ခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်စိတျလှုပျရှားမှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1998 ။ စနစ်များနှင့်အာရုံကြောစနစ်၏ anticipatory ပြည်နယ်များရှာကြံ; စစ။ 144-163 ။
55 ။ Kalivas PW ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ၏ Neurotransmitter စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993;18: 75-113 ။ [PubMed]
56 ။ Strafella AP, pause T က, Barrett J ကို, လူ့ prefrontal cortex ၏ Dagher အေထပ်ခါထပ်ခါ transcranial သံလိုက်ဆွဟာ caudate နျူကလိယအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: RC157 ။ [PubMed]
57 ။ Sano M က, Marder K ကို Dooneief G. အ Basal ganglia ရောဂါများ။ ခုနှစ်တွင်: Fogel BS, Schiffer RB, Rao က SM, အယ်ဒီတာများ။ Neuropsychiatry ။ Baltimore: Williams နှင့် Wilkins; 1996 စစ။ 805-834 ။
58 ။ Ito က R ကို, Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ် cue များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 6247-6253 ။ [PubMed]
59 ။ Finch DM ။ အဆိုပါ caudate / putamen နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏တစ်ခုတည်းတွင် neuron ပေါ်သို့ကြွက် prefrontal cortex, amygdala, midline thalamus နှင့် hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးကနေ Synaptic သွင်းအားစုဆုံ၏ Neurophysiology ။ Hippocampus ။ 1996;6: 495-512 ။ [PubMed]
60 ။ Lavin တစ်ဦးကရေ့ AA ကို။ အဆိုပါ Basal ganglia အားဖြင့် thalamo-cortical လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ: အ ventral pallidum အားဖြင့် dorsal thalamic ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု Modulation ။ synapses ။ 1994;18: 104-127 ။ [PubMed]
61 ။ ဘန်း LH, Robbins TW, Everitt BJ ။ အဆိုပါ basolateral amygdala ၏ excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ differential သက်ရောက်မှု, ventral subiculum နဲ့ D-စိတ်ကြွဆေး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens တာဟာအားဖြင့် potentiated conditional အားဖြည့်ခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတုံ့ပြန်အပေါ် prefrontal cortex medial ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1993;55: 167-183 ။ [PubMed]
62 ။ Everitt BJ, ME Wolf ။ Psychomotor လှုံ့ဆော်စွဲ: တစ်အာရုံကြောစနစ်များကိုရှုထောင့်။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 3312-3320 ။ [PubMed]
63 ။ ကုန်သည်များ RA, ကိုယ်ပိုင် DW ။ မွေးကင်းစကလေးများ ventral hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်မှစိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှု: dual-ရောဂါ schizophrenia များ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2002;27: 889-905 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
64 ။ ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေး-ရှာမှပြန်သွားကြသည်: အာရုံကြောနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998;51: 49-60 ။ [PubMed]
65 ။ Finlay JM, Zigmond MJ ။ အလယ်ပိုင်း dopaminergic အာရုံခံအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ: တတ်နိုင်သမျှလက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ Neurochem Res ။ 1997;22: 1387-1394 ။ [PubMed]
66 ။ Koepp MJ, ဂွန် RN, လောရင့်အေဒီ, Cunningham VJ, Dagher တစ်ဦးက, ဂျုံးစ် T က, Brooks DJ သမား, Bench CJ, Grasby pm တွင်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကာလအတွင်း striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်သက်သေအထောက်အထား။ သဘာဝ။ 1998;393: 266-268 ။ [PubMed]
67 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex ။ 2000;10: 318-325 ။ [PubMed]
68 ။ Ljungberg T က, Apicella P ကို, အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းမျောက် dopamine အာရုံခံ၏ Schultz ဒဗလျူတုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol ။ 1992;67: 145-163 ။ [PubMed]
69 ။ Lipska ကယ်, Jaskiw GE, Chrapusta S က, Karoum က F, Weinberger DR ။ အဆိုပါ ventral hippocampus ၏ Ibotenic အက်ဆစ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် differential dopamine နှင့်ကြွက်များတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက်၎င်း၏ metabolites သက်ရောက်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1992;585: 1-6 ။ [PubMed]
70 ။ Badiani တစ်ဦးက, Oates MM, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ Contextual လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်အကဲဆတ်ခြင်း Modulation ။ Psychopharmacology (Berl) 2000;151: 273-282 ။ [PubMed]
71 ။ Ferster သမဝါယမ, Skinner BF ။ စစ်ကူ၏အချိန်ဇယား။ နယူးယောက်: Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု-Crofts; 1957 ။
72 ။ Waelti P ကို, Dickinson တစ်ဦးက, Schultz ဒဗလျူ Dopamine တုံ့ပြန်မှုတရားဝင်သင်ယူမှုသီအိုရီ၏အခြေခံယူဆချက်ကိုလိုက်နာ။ သဘာဝ။ 2001;412: 43-48 ။ [PubMed]
73 ။ Horger BA, Iyasere, CA, Berhow MT, Messer CJ, Nestler EJ, တေလာ JR ။ ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်အားဖြင့်ကိုကင်းဖို့ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ conditional ဆုလာဘ်၏စွမ်းရည်မြှင့်။ J ကို neuroscience ။ 1999;19: 4110-4122 ။ [PubMed]
74 ။ Gurden H ကို, Tassin JP, ဂျေး TM အလိုအလျောက်။ mesocortical dopaminergic စနစ်၏သမာဓိရှိ Vivo hippocampal-prefrontal cortex ရေရှည်အလားအလာများပြည့်စုံစကားရပ်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ neuroscience ။ 1999;94: 1019-1027 ။
75 ။ Mulder AB, ဝိဇ္ဇာ MPM, Lopes da Silva FH ။ Vivo ထဲမှာ, ကြွက်များတွင် accumbens နှင့် prefrontal cortex လမ်းကြောင်း nucleus ဖို့ hippocampus ၏ရေတိုနှင့်ရေရှည် plasticity ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1997;9: 1603-1611 ။ [PubMed]
76 ။ စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ရော်ဘင်ဆင်သည် T, Kolb ခ ALTER ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999;11: 1598-1604 ။ [PubMed]
77 ။ Hyman SE, Malenka RC ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: မလှူခြင်းနှင့်ဇွဲ၏ neurobiology ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001;2: 695-703 ။ [PubMed]
78 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993;18: 247-291 ။ [PubMed]
79 ။ Deroche V ကို, Le Moal က M, Piazza PV ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများတိုးပွားစေပါသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999;11: 2731-2736 ။ [PubMed]
80 ။ ဘရောင်း GL, Linnoila MI ။ CSF serotonin metabolite (5-HIAA) စိတ်ကျရောဂါ, Impulse နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများအတွက်လေ့လာမှုများ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1990 ဧပြီလ;51(ပျော့ပျောင်း): 31-41 ။ [PubMed]
81 ။ Virkunnen M က, Rawlins R ကို, Tokola R. CSF ဇီဝဓါတုဗေဒ, ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ခြင်း, အရက်အကြမ်းဖက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ, မီးဆိုသည်အကြောင်းနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် diurnal လှုပ်ရှားမှု rhythms ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994;51: 20-27 ။ [PubMed]
82 ။ Nordin ကို C, ရောဂါဗေဒအထီးလောင်းကစားသမားတွေအတွက် Eklundh တီ ALTER CSF 5-HIAA သဘော။ CNS Spectrum ။ 1999;4: 25-33 ။ [PubMed]
83 ။ တေလာ JR, Jentsch JD ။ psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးထပ်ခါတစ်လဲလဲပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင် Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူပွောငျးလဲ: ကိုကင်း, D-စိတ်ကြွဆေးနှင့် 3,4-methylenedioxymethamphetamine ၏ differential ကိုသက်ရောက်မှု ( "Ecstasy") Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;50: 137-143 ။ [PubMed]
84 ။ ခဝါသည် RW ။ serotonin function ကိုများနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူအပေါ် Fluoxetine ဆိုးကျိုးများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1996;794: 90-97 ။ [PubMed]
85 ။ Cherek DR, ယာဉ်ကြော SD, Pietras CJ, Steinberg JL ။ အကငျြ့ရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား၏ရန်လိုခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောတုံ့ပြန်မှု၏အစီအမံအပေါ်နာတာရှည် paroxetine အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2002;159: 266-274 ။ [PubMed]
86 ။ White က SR, Obradovic T က, Imel KM, Wheaton MJ ။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် monoaminergic neurotransmission အပေါ် methylenedioxymethamphetamine (MDMA "Ecstasy") ၏ဆိုးကျိုးများ။ prog Neurobiol ။ 1996;49: 455-479 ။ [PubMed]
87 ။ Damasio H ကို, Grabowski T က, ဖရန့် R ကို, Galaburda လေး, Damasio AR ။ Phineas Gage ၏ပြန်လာ: တစ်ကျော်ကြားလူနာများ၏ဦးခေါင်းခွံကနေဦးနှောက်အကြောင်းကိုသဲလွန်စ။ သိပ္ပံ။ 1994;264: 1102-1105 ။ [PubMed]
88 ။ McAllister TW ။ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာများ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ sequelae ။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 1992;15: 395-413 ။ [PubMed]
89 ။ Ames: D, Cummings က JL, Wirshing WC, Quinn B, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးသမ္မတကတော်အတွက် Mahler အမ်ထပ်ခါထပ်ခါနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူ။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience ။ 1994;6: 100-113 ။ [PubMed]
90 ။ မိုဃ်းရေ၏, Lencz T က, Bihrele S က, LaCasse L ကို, Colletti P. prefrontal မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချခြင်းနှင့် antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;57: 119-127 ။ [PubMed]
91 ။ Ommaya AK, Salazar လေး, Dannenberg AL, Ommaya AK, Chervinsky AB, အမေရိကန်စစ်ဘက်ဆေးပညာဆိုင်ရာစနစ်စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာရပြီးနောက် Schwab K. ရလဒ်။ J ကိုစိတ်ဒဏ်ရာ။ 1996;41: 972-975 ။ [PubMed]
92 ။ Barnfield တီဗီ, Leathem JM ။ ဖြစ်ပွားမှုနှင့်နယူးဇီလန်ထောင်ထဲမှာလူဦးရေအတွက်စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရလဒ်များ။ ဦးနှောက် Inj ။ 1998;12: 455-466 ။ [PubMed]
93 ။ Delmonico RL, Hanley-Peterson P ကို, စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်အတူလူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အင်္ဂလန်ဂျေ Group မှ psychotherapy: စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုစီမံခန့်ခွဲမှု။ J ကိုဦးခေါင်းစိတ်ဒဏ်ရာ Rehab ။ 1998;13: 10-22 ။
94 ။ Dao-Castellana MH, ရှံဆုန်က Y, Legault က F, Martinot JL, Aubin HJ, Crouzel ကို C, Feldman L ကို, Barrucand: D, Rancurel, G, Feline တစ်ဦးက, အာရုံကြောပုံမှန်နာတာရှည်အရက်စွဲဘာသာရပ်များအတွက် Syrota အေတိုကျရိုကျကမောက်ကမဖြစ်မှု: ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့် neuropsychological တွေ့ရှိချက်။ Psychol Med ။ 1998;28: 1039-1048 ။ [PubMed]
95 ။ လျူက X, Matochik ဂျာ Cadet JL, လန်ဒန် ED ။ polysubstance ချိုးဖောက် prefrontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏သေးငယ်တဲ့ volume: တစ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 1998;18: 243-252 ။ [PubMed]
96 ။ ရော်ဂျာက RD, Everitt B, Baldacchino တစ်ဦးက, Blackshaw AJ, Swainson R ကို, Wynn K ကို Baker NB, Hunter J ကို, Carthy T က, Booker အီး, လန်ဒန်က M, Deakin JFW, Sahakian BJ, Robbins TW ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနဲ့ tryptophan-ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ Dissociable လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;20: 322-339 ။ [PubMed]
97 ။ Franklin TR, Acton PD, Maldjian ဂျာ Grey က JD, Croft JR, Dackis, CA, O 'Brien က CP, Childress AR ။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စဟာနောက်ကျနေခဲ့သည်, orbitofrontal အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု, cingulate နှင့်ကိုကင်းလူနာယာယီ cortical လျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;51: 134-142 ။ [PubMed]
98 ။ လို့ McGregor တစ်ဦးက, Baker, G, ရောဘတ် DC က။ အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် medial prefrontal cortex ၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1996;53: 5-9 ။ [PubMed]
99 ။ Weissenborn R ကို, Robbins TW, Everitt BJ ။ fixed-အချိုးအစားနှင့်ကြွက်များအတွက်အားဖြည့်များ၏ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်အပေါ် medial prefrontal သို့မဟုတ် anterior cingulate cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 1997;134: 242-257 ။ [PubMed]
100 ။ Karreman M က, Westerink BHC, အ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Moghaddam ခ Excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် receptors အဆိုပါ ventral striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိ။ J ကို Neurochem ။ 1996;67: 601-607 ။ [PubMed]
101 ။ Youngren KD, Daly DA, အနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ထွက်သွားအပေါ် endogenous excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် Moghaddam ခထူးခြားသောလုပ်ရပ်များ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1993;264: 289-293 ။ [PubMed]
102 ။ Brady KT, Myrick H ကို, McElroy အက်စ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်း, ရောဂါဗေဒကျူးကျော်များအကြားဆက်ဆံရေး။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 1998;7: 221-230 ။ [PubMed]
103 ။ Jentsch JD, တေလာ JR ။ ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse ။ Psychopharmacology (Berl) 1999;146: 373-390 ။ [PubMed]
104 ။ Feinberg ဗြဲ Schizophrenia: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း program Synaptic ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်အမှားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့? J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 1983;17: 319-334 ။ [PubMed]
105 ။ သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး Yates တီသီအိုရီ။ ခုနှစ်တွင်: Lewis က M ကို, အယ်ဒီတာ။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ Baltimore: Williams နှင့် Wilkins; 1996 စစ။ 134-155 ။
106 ။ Moore က SM, Rosenthal DA ။ Venturesomeness, Impulse, နှင့်အထက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များအပြုအမူ။ အမြင် Mot ကျွမ်းကျင်မှု။ 1992;76: 98 ။ [PubMed]
107 ။ Siegel J ကို, Shaughnessy MF ။ အရာအားလုံးများအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရှိပါတယ်: နားလည်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ 1995;30: 217-221 ။ [PubMed]
108 ။ Leckman JF, Cohen ကို DJ သမား။ နေကြပါပြီမမှန်။ ခုနှစ်တွင်: Lewis က M ကို, အယ်ဒီတာ။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ Baltimore: Williams နှင့် Wilkins; 1996 စစ။ 622-629 ။
109 ။ Laviola, G, Adriani W က, Terranova ML, လူ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက် Gerra G. အ Psychobiological အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1999;23: 993-1010 ။ [PubMed]
110 ။ လှံကို LP သို့ဘရိတ် SC ။ Periadolescence: အသက်အရွယ်-မှီခိုအပြုအမူများနှင့်ကြွက်များအတွက် psychopharmacological Response ။ dev Psychobiol ။ 1983;16: 83-109 ။ [PubMed]
111 ။ Adriani W က, Chiarotti က F, Laviola G. အဓာတ်လှေကားအသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှိုင်းယှဉ် periadolescent အတွက်ပုံမှန်ဃ-စိတ်ကြွဆေးာင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1998;112: 1152-1166 ။ [PubMed]
112 ။ Laviola, G, Wood က RG, Kuhn က C, Francis က RLP ။ periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းာင်း။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995;275: 345-357 ။ [PubMed]
113 ။ Laviola, G, Pascucci T က, periadolescent D-စိတ်ကြွဆေး၏ Pieretti အက်စ် Striatal dopamine လွယ်ပေမယ်မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2001;68: 115-124 ။ [PubMed]
114 ။ Takeuchi Y ကို, Matsushita H ကို, Sakai က H ကို, Kawano H ကို, Yoshimoto K ကို Sawada တီ Developmental တစ် Coulochem လျှပ်ကူးပစ္စည်းစစ်ခင်းကျင်းသည့်စနစ်နှင့်အတူထင်ရှား monoamine-related တ္ထုများ၏ cerebrospinal fluid ကိုပြင်းအားပြောင်းလဲမှုများ။ J ကိုကလေး Neurol ။ 2000;15: 267-270 ။ [PubMed]
115 ။ သိုးသငယ်ကို, E, Krimer LS, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ မျောက်တွေကို၏ prefrontal cortex အတွက်ဖော်ထုတ်အာရုံခံမှ catecholamines နှင့် serotonin သွင်းအားစု၏ postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Differential ။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 8780-8787 ။ [PubMed]
116 ။ ဆယ်လူလာယန္တရားများ: Garcia က-Segura L ကို, Chowen J ကို, Parducz တစ်ဦးက, Naftolin အက်ဖ် Gonadal ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Synaptic plasticity မြှင့်တင်ရေးအဖြစ် hormones ။ prog Neurobiol ။ 1994;44: 279-307 ။ [PubMed]
117 ။ အဆိုပါ hippocampus အတွက်အီစထိုဂျင်အရေးယူဘို့ဝတ္ထုဆိုဒ်များ: Shughrue PJ, Merchenthaler ဗြဲအီစထိုဂျင်ရုံ "လိင်ဟော်မုန်း" ထက်ပိုပါတယ်။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2000;21: 95-101 ။ [PubMed]
118 ။ Zarrow MX, Naqvi RH အ, Denenberg VH ။ အမျိုးသမီးကြွက်နှင့် hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဖြင့်၎င်း၏တားစီးအတွက်အန်ဒရိုဂျင်-သွေးဆောင် ပတျသကျ. အပျိုဖော်ဝင်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1969;84: 14-19 ။ [PubMed]
119 ။ အဆိုပါနှောက် cortex ၏ Gorski R. ဖွံ့ဖြိုးရေး, XV: ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;38: 344-346 ။ [PubMed]
120 ။ Sizonenko PC ကို။ preadolescents နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ J ကို dis ကလေးဖြစ်၏။ 1978;132: 704-712 ။ [PubMed]
121 ။ Buchanan CM, ဒ JS, Becker က JB ။ မြီးကောင်ပေါက်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ဟော်မုန်း၏သားကောင်များဖြစ်ကြ: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်ဟော်မုန်း Active သက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထား။ Psychol Bull ။ 1992;111: 62-107 ။ [PubMed]
122 ။ McClelland JL, McNaughton BL, O'Reilly RC ။ အဘယ်ကြောင့်ဖြည့်စွတ်သင်ယူမှုစနစ်များ hippocampus နှင့် neocortex အတွက်ရှိပါသလဲ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ connectionist မော်ဒယ်များများ၏အောင်မြင်မှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများမှထိုးထွင်းသိမြင်။ Psychol ဗျာ 1995;102: 419-457 ။ [PubMed]
123 ။ အချက်အလက်များနှင့်သီအိုရီ: Schmajuk NA, Christionsen B က, ကော့အယ်လ် Haloperidol hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်အာရုံချို့ယွင်းငုပ်လျှိုးနေတားစီး reinstates ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000;114: 659-670 ။ [PubMed]
124 ။ Legault M က, နျူကလိယ၏ပညာရှိ R. ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း-evoked မြင့်တက် dopamine accumbens: အ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းရှိ ventral subiculum နှင့် glutamatergic neurotransmission ထံမှချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စီးဆင်းမှုအပေါ်မှီခို။ EUR J ကို neuroscience ။ 2001;13: 819-828 ။ [PubMed]
125 ။ ဝူး TU, Pucak ML, Kye CH, မတူ CV ကို, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex အတွက်အခ်ါများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ circuitry ၏ Peripubertal သနျ့စ။ neuroscience ။ 1997;80: 1149-1158 ။ [PubMed]
126 ။ Williams က BR, Ponesse JS, Schachar RJ, Logan GD, အသက်တမ်းတစ်လျှောက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု Tannock R. ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ dev Psychol ။ 1999;35: 205-213 ။ [PubMed]
127 ။ Goodin DS, Squires KC, Henderson BH, သာမန်လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှ evoked အလားအလာအတွက် Starr အေခေတ်-related များပါတယ်။ Electroencephalogr Clin Neurophysiol ။ 1978;44: 447-458 ။ [PubMed]
128 ။ Giedd ဖြစ်မှု, Snell JW, Lang N ကို, Rajapakse JC, Casey BJ, Kozuch PL, Vaituzis AC အ, Vauss YC, ဟမ်ဘာဂါ SD, Kaysen: D, Rapoport JL ။ လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ quantitative သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်: အသက်အရွယ် 4-18 ။ Cereb Cortex ။ 1996;6: 551-560 ။ [PubMed]
129 ။ pause T က, Zijdenbos တစ်ဦးက, Worsley K သည်, Collins က DL, Blumenthal J ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Rapoport JL, အီဗန်, AC ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရငျ့: Vivo လေ့လာမှုမှာ။ သိပ္ပံ။ 1999;283: 1908-1911 ။ [PubMed]
130 ။ Kety အက်စ်အက်စ်။ အိုမင်းမှအဖြစ်ဆက်စပ်လူ့ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်အောက်စီဂျင်စားသုံးမှု။ res Publ Assoc res အာရုံကြော Ment dis ။ 1956;35: 31-45 ။ [PubMed]
131 ။ Chugani HR, Phelps ME, Mazziotta JC ။ လူ့ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ အမ်း Neurol ။ 1987;322: 487-497 ။ [PubMed]
132 ။ Yakovlev PI, Lecours AR ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏ဒေသဆိုင်ရာရင့်ကျက်ခြင်း၏ Myelogenetic Cycle ။ Philadelphia တွင်: အက်ဖ်အေ Davis က; 1967 ။
133 ။ Nudo RJ, မာစတာ RB ။ ဗဟိုအာရုံစနစ် Synaptic လှုပ်ရှားမှု stimulation-သွေးဆောင် [14C] 2-deoxyglucose တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။ J ကို comp Neurol ။ 1986;245: 553-565 ။ [PubMed]
134 ။ Lewis က DA ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: schizophrenia အတွက်အားနည်းချက်အာရုံကြောဆားကစ်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neuropsychopharmacology ။ 1997;16: 385-398 ။ [PubMed]
135 ။ Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့တိုကျရိုကျ cortex အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆ: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်အိုမင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1979;163: 195-205 ။ [PubMed]
136 ။ Anderson က SA, Classey JD, အခြေအနေက F, Lund JS, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex ၏အလွှာ III ကိုအတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံဆဲလျ dendritic ကျောရိုးနှင့် parvalbumin-immunoreactive chandelier အာရုံခံဆဲလျ axon ဆိပ်ကမ်း၏ synchronous ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ neuroscience ။ 1995;67: 7-22 ။
137 ။ ရပ်သဖော့ဒ LC, နယ်လ်ဆင် SB, Turrigiano GG ။ BDNF ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံဆဲလျမြားနှငျ့အကြားအာရုံခံဆဲလျ excitatory synapses ၏ quantal လွှဲခွင်ပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1998;21: 521-530 ။ [PubMed]
138 ။ Miller က KD ။ Synaptic ဘောဂဗေဒ: Synaptic plasticity အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1996;17: 371-374 ။ [PubMed]
139 ။ အလက်ဇန်းဒါး GE ။ မျောက်တွေကိုတိုကျရိုကျအသင်းအဖွဲ့ cortex ၏ functional ဖှံ့ဖွိုးတိုး: အမူအကျင့်များနှင့် electrophysiological လေ့လာမှုများ။ neuroscience Res ပရိုဂရမ် Bull ။ 1982;20: 471-479 ။
140 ။ Spitzer အမ် အဆိုပါ Net ကအတွင်းမှာပဲစိတ်။ ကင်းဘရစ်, Mass: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 1999 ။
141 ။ Milberger S က, Biederman J ကို, Faraone SV, Wilens T က, Chu အမတ်။ ADHD နဲ့ psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားအသင်းအဖွဲ့များ။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 1997;6: 318-329 ။ [PubMed]
142 ။ Biederman J ကို, Wilens T က, Mick, E, Spencer T က, Faraone SV ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ Pharmacotherapy ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်လျော့နည်းစေသည်။ ကလေးအထူးကု။ 1999;104: 1-5 ။ [PubMed]
143 ။ Lynskey MT, ခန်းမဒဗလျူအာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်: တစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုရှိပါသလော စွဲလမ်း။ 2001;96: 815-822 ။ [PubMed]
144 ။ DelBello အမတ်, Soutullo, CA, Hendrick W က, Niemeier RT ကို, McElroy SL, Strakowski သည် SM ။ စိတ်ကြွရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်မတိုင်မီကလှုံ့ဆော်ကုသမှု: စတင်ခြင်းမှာအသက်အရွယ်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့။ bipolar disorder ။ 2001;3: 53-57 ။ [PubMed]